Warbixin : "Maalinta Caalamiga ee Gabdhaha Da'da Yar"
11 ka bisha October oo Arbacadii shalay ku beegneyd, ayaa sanadkasta dunida laga xusaa "Maalinta Caalamiga ah ee Gabdhaha yar yar," iyada oo maalintaasi la xoojiyo wacyi galinta, caafimaadka, waxbarashada iyo daryeelka hablaha.
Kulankii 72-aad ee golaha guud ee Qaramada Midoobay ee dhawaan lagu soo gabo gabeeyay magaalda New York, ayaa si gaar ah looga hadlay arimaha gabdhaha yar yar iyo guud ahaan dumarka, waxa la soo bandhigay tirada guud ee gabdhaha da'doodu ka yartahay 18 jir ka ee dunida ku nool iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Priyanka Chopra oo ah jilaa caan ka ah dunida una u dhalatay dalka India, islamarkaana la shaqaysa UNICEF ayaa ka waramaysa dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha yar yar ee ku nool Afrika iyo guud ahaan caalamka ay dagaaladu ka jiraan.
Sahra Ciidle Nuur oo shirkaasi ka qayb gashay ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Dhageyso Maalinta Gabdhaha Adduunka